>2 patients of Phyu Phyu Thin | MoeMaKa Burmese News & Media
>MoeMaKa Reader from Rangoon - Donor ? Fund Rasier? Volunteer himself ?
>Cartoon Maung Yit - Crime Does Not Pay as many as 65 years like Oppositions in Burma
>Maung Swan Yi - Publisher Tin Moe
>2 patients of Phyu Phyu Thin
အပြုအမူတွေ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ မောင်ဇော် နဲ့ ကိုစန်း
သြဂုတ် ၁၁၊ ၂ဝ၁ဝ
(မဖြူဖြူသင်းက သူ ကူညီခဲ့သူတွေထဲက ကိုရဲကျော်၊ ကိုသာပေါင်း တို့ အကြောင်းကို အပြုအမူ ပြောင်းလဲသွားသူ ၂ ဦး ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ ဧရာဝတီ မှာ ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်။ သူ့ဘလော့မှာလည်း ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီတခါတော့ မောင်ဇော်၊ ကိုစန်း ဆိုတဲ့ ထူးခြားသူ ၂ ဦးအကြောင်းကို မဖြူဖြူသင်းက ပြောပြထားပါတယ်။)
တချိန်ကဆိုရင် ကျမ ကူညီနေတဲ့ လူနာတွေ ရှိတဲ့ ဝေဘာဂီဆေးရုံကို နေ့တိုင်း နီးပါး ကျမ ရောက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းကလည်း မင်္ဂလာဒုံ ဆေးရုံကလည်း မပေါ်သေးတော့ ဝေဘာဂီမှာပဲ လူနာတွေ အတင် များတာပါ။ ဝေဘာဂီကို သွားရင် ကျမလူနာကော ကျမလူနာ မဟုတ်သူတွေကပါ ကျမကို အကူအညီ တောင်းကြပါတယ်။ သူတို့က ကျမကို နိုင်ငံတကာ အန်ဂျီအို တခုခုကလို့ ထင်မှတ်ထားကြပုံပါပဲ။ ကျမလည်း တတ်နိုင်သမျှ အားပေးပြီး ကျမမှာ ရှိသမျှနဲ့ ကူညီပါတယ်။ ကူညီနေရပေမယ့် ဆင်ပါးစပ် နှမ်းပက်သလို ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျမလည်း စိတ်မကောင်းခြင်းစွာ ဖြစ်ရပါတယ်။
ဝေဘာဂီ ကူးစက်ဆေးရုံကို သွားရင် ဆံပင်ရှည်ရှည်နဲ့ တကိုယ်လုံး အရုပ်တွေ ထိုးထားတဲ့ ကောင်လေးတယောက် အမြဲလိုလို အရက် မူးနေတာလိုလို ဆေးမူးနေတာလိုလို ကောင်လေး တယောက်ကို အမြဲတွေ့ပါတယ်။ သူက အမြဲ ပြုံးပြတာလောက်ပဲ လုပ်ပါတယ်။ တခြား လူနာတွေလို ကျမဆီ အကူအညီ တောင်းတာမျိုးတော့ မလုပ်ပါဘူး။
အမူးသမားလိုလို ဖြစ်နေတဲ့ ဒီကလေးကို ကျမလည်း စကားပြောချင်စိတ် မရှိလို့ မပြောပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျမ လူနာတွေ ပြောပြချက် အရ သူ့မိန်းမကော ကလေးပါ ဆေးရုံမှာ တင်ထားရတယ် ဆိုတာ သိရတော့ ကရုဏာ သက်မိသလို သူ့ကိုလည်း စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ သူကတော့ သန်သန်မာမာပါပဲ။ နောက်တပတ် အကြာမှာ ကျမ ဆေးရုံပေါ် တက်သွားတော့ ငိုကြီးချက်မနဲ့ လူးလှိမ့်နေတဲ့ ကောင်လေးကို တွေ့ပါတယ်။ သူ့ကလေး ဆုံးသွားပြီ တဲ့။ ကျမကလည်း အားပေးစကား ပြောတာပေါ့လေ။ အရက်နံ့ကတော့ သူ့ဆီက တထောင်းထောင်း ထနေတာပါပဲ။ ကျမကလည်း သူ ခံစားနေချိန် သောက်တာဖြစ်မှာပါ ဆိုပြီး ဘာမှ မပြောပါဘူး။
တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ သူ့ကလေးဆုံးပြီး ရက်လည်နေ့မှာ ကောင်လေးက အတော်လေး မူးရူးပြီး သတိ လစ်သလိုလို နတ်ပူး သလိုလို လုပ်နေတာ တွေ့ရပြန်ပါတယ်။ ကျမ အတော်လေး စိတ်ပျက်သွားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ချက်ခြင်း ဆိုသလိုပဲ သူ့မိန်းမ အဲ့ဒီနေ့ပဲ ဆုံးသွားတယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့မှ ကျမလည်း သူ့အတွက် အတော် လေး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်ရပြီး အတော်လေး သနားသွားပါတယ်။
သူကလည်း ရောဂါသည် ဆိုတော့ ခုလိုမျိုး စိတ်သောကနဲ့ အရက် သောက်တာတွေကော၊ ဆေးချတာတွေပါ လုပ်နေရင် မဖြစ်ချေဘူး ဆိုပြီး နောက်တရက် မနက် အစောကြီး သူနဲ့ စကားပြောဖို့ ဆေးရုံကို လိုက်သွားပါတယ်။ အခြား လူနာတွေကို မေးကြည့်တော့ မောင်ဇော် တယောက် မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ သူ့ရွာ ပြန်သွားပြီ တဲ့။
သူနေတာက ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မှာပါ။ ဒီတော့ သူ့ကို ခြေရာခံဖို့ မခက်ခဲပါဘူး။ ကျမတို့ အဖွဲ့ဝင်တွေက တဆင့် စုံစမ်းကြည့်တော့ ဒီကောင်လေး မနက်ကော ညကော တချိန်လုံး သောက်စားပြီး ငိုယိုနေတာပဲ တဲ့။ မေးကြည့်တိုင်း မူးရူးနေတယ် ပြောပြောနေတော့ သေအောင်လုပ်နေတာပဲ၊ လုပ်ပစေတော့ ဆိုပြီး မေ့မေ့ ပျောက်ပျောက် ထားလိုက်ပါတယ်။
တနှစ်လောက် ရှိတော့ မောင်ဇော်ကို ဆေးရုံမှာ ပြန်တွေ့ပါတယ်။ မမှတ်မိလောက်အောင် ပိန်လှီနေပြီးတော့ အေအိုင်ဒီအက်စ် အဆင့်ကိုတောင် ရောက်နေပါပြီ။ သူက ကျမကို တွေ့တော့ ထုံးစံ အတိုင်း ပြုံးပြပါတယ်။ သူ့ကို ကြည့်ပြီး ကျမလည်း စိတ် မချမ်းမသာ ဖြစ်မိပါတယ်။ သူကတော့ ကျမကို အားတက်သရောပါပဲ။ “ကျနော် အခု ဆေး ရတော့မယ် အစ်မ” တဲ့။ အေအာတီဆေးက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူနာတိုင်း မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆေးရပြီ ဆိုရင် လူနာတွေက ၀မ်းသာကြပါတယ်။ ကျမကလည်း သူ့ကို နင် ဆေးမသောက်ဘဲ အရက်ပဲ သောက်ပါလား လို့ နောက်မိပါတယ်။ ကျနော် ပြန်ကောင်းလာရင် မလုပ်တော့ပါဘူး လို့တော့ ပြောတာပါပဲ။ ကျမက မယုံပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုဆို ကောင်းတာပေါ့ လို့ပဲ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ကျမလည်း ရုံးကိစ္စတွေ တခြား လူနာကိစ္စတွေကြောင့် ဆေးရုံဘက် မရောက်ဖြစ်ပြန်ဘူး။ ဒါပေမယ့် မောင်ဇော် တယောက် NGO တခုမှာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်နေကြောင်း၊ အရက်လည်း မသောက်တဲ့ အကြောင်းတွေတော့ ကြားနေရပါတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့အတွက်လည်း စိတ် ချမ်းသာရပါတယ်။
တရက်ကျတော့ မောင်ဇော် တယောက် ကျမအိမ်ကို အစောကြီး ရောက်လာပါတယ်။ သူ့ဆီကလည်း အရက်နံ့ တထောင်းထောင်း ထလို့။ သူလုပ်နေတဲ့ NGO နဲ့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ၊ အဆင် မပြေတာတွေကို ကပေါက် ကချာ ပြောနေပြန်ပါတယ်။ ဒီကလေးကို ကြည့်ပြီး ကျမလည်း ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း မသိ၊ ဒေါသကလည်းဖြစ်၊ နင်ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတော့ ကျနော် အစ်မ တို့ကို ကူညီချင်တယ် တဲ့။ ကျမ အတော်လေး စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ မဖြစ်မနေ နင်နေချင်ရင်တော့ လူနာတွေ စုနေတဲ့ တောင်ဒဂုံ(၁၈) အိမ်မှာ သွားနေဖို့ ပြောလိုက်တယ်။
သွားနေပါတော့လို့ ပြောလိုက်ရပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းမလဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမှာနေတဲ့ ကျမအဖွဲ့က လူငယ်တွေကလည်း ရှိနေတော့ ကြည့်ထိန်းရင် ဖြစ်လောက်ပါတယ် လို့တော့ တွေးမိပါတယ်။ သူကကော ပြုပြင်ချင်စိတ် ရှိပါ့မလား စဉ်းစားပြီး စိတ်မောမိပါတယ်။ အံ့သြ ၀မ်းသာဖို့ ကောင်းတာက အဲဒီနေရာကို ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း
လူနာတွေအိမ် ရောက်ပြီး နောက်ပိုင်း မောင်ဇော်ဟာ ဒီနေ့ချိန်ထိ သောက်တာ စားတာလည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ လူနာတွေမှန်သမျှ ဆေးရုံတက်ရင်လည်း သူပဲ လိုက်စောင့်၊ ဆေးခန်းလည်း သူပဲ ပို့၊ သေတဲ့လူလည်း သူပဲ အသုဘချ ဆိုတာတွေကို လုပ်ပေးနေရှာပါတယ်။ ဒီအလုပ်တွေအတွက် သူ ငွေတပြားတချပ်မှ မရဘူး၊ ထမင်းကိုတော့ အလျဉ်းသင့်သလို ကျွေးပြီး လမ်းစရိတ် ပေးတာလောက်ပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ကျမတို့အခြေအနေမှန်ကိုလည်း သူ သိပါတယ်။
နောက်တယောက်က ကျမတို့ အိမ်နီးနားချင်း တယောက်ပါ ကိုစန်းလို့ အလွယ် ခေါ်ပါတယ်။ ကျမတို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးနေတာပါ။ ကျမတို့ အိမ်ရှေ့မှာ ကော်စက် ဆွဲတဲ့အလုပ် လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက စကားလည်း မပြောပါဘူး ဒါပေမယ့် ဥက္ကလာထဲမှာ ရိုက်ပွဲ ဖြစ်တယ်ဆိုရင် သူ ထိပ်ဆုံးကပဲ။ လမ်းသူရဲ ခေါ်မလား လူမိုက် ခေါ်မလားပဲ။ လူလည်း ခဏခဏ ရိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် ဆိုးသလဲ ဆိုတော့ လက်ဖက်ရည် တခွက် တိုက်ရင်ကို လူရိုက်ပါသတဲ့။ ကျမတို့နဲ့ ရင်းနှီးတယ် ဆိုပေမယ့် ဒီလို စရိုက်ကြီးကြောင့် ကျမတို့ကတော့ ဖာသိဖာသာ နေလိုက်တာပါပဲ။
ဒါနဲ့ သူငါးနှစ်လောက် ပျောက်သွားပါတယ်။ ရေတာရှည်ဘက်မှာ အိမ်ထောင် ကျပြီး သစ်မှောင်ခို လုပ်နေသလိုလို ကားစပယ်ယာ လုပ်နေသလိုလို ကြားတာပါပဲ။ ၇ နှစ်လောက် ရှိတော့ သူ ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ မိန်းမကော ကလေးပါ ဆုံးသွားပြီတဲ့ ရှေ့ဆင့် နောက်ဆင့်ပဲ ဆုံးတာပါတဲ့။ သူ့အဒေါ်တွေက ကျမတို့ အိမ်မှာ အလုပ်လုပ်တော့ သူ့အကြောင်းကို မကြားချင်လည်း ကြားနေရတာပါပဲ။
သူကတော့ ထုံးစံတိုင်း စကား နည်းမြဲပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျမက ဒီ အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ကိစ္စတွေ လုပ်နေတယ် ဆိုတာ သိတော့ အကူအညီ လာတောင်းပါတယ်။ သူ့မိန်းမနဲ့ ကလေးကော ဒီရောဂါနဲ့ ဆုံးသွားလို့ သူလည်း သွေးစစ်ချင်တယ် ပြောပါတယ်။ သူရောဂါဖြစ်နေတယ် ဆိုတော့လည်း ကျမ လိုက် ကူညီပေးပြီးတော့ ဆေးရအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီမှာတင် ပြဿနာ တခုက သူ့မှာ နေစရာမရှိ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကျမကလည်း သူ့ကို ကြောက်တော့ ခေါ်ထားဖို့ အတော့်ကို စဉ်းစားရပါတယ်။ အခြား အတူနေ လူနာတွေကို မထင်ရင် မထင်သလို လုပ်လိုက်မှာကို ကြောက်တာပါ။ ဒါပေမယ့် အရဲစွန့်ပြီးတော့ ခေါ်ထားလိုက်ပါတယ်။
ကြောက်စရာ ကိုစန်းတယောက် လူနာအိမ်ရောက်ပြီးနောက်မှာ အင်မတန် ပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ခုဆို အဝေးပြေးကားဂိတ်မှာ လူနာကြိုတာ၊ ဆေးခန်းပြတာ၊ လူနာတွေကို လိုက်ပြုစုပေးတာ၊ အိမ်တွေကို လိုက်ပြုစုပေးတာတွေကို ကျမတို့နဲ့ တန်းတူ တကယ် လုပ်နေပါတယ်။
မောင်ဇော် နဲ့ ကိုစန်းတို့ နှစ်ယောက် ပြောင်းလဲပုံကိုလည်း ကျမ အံ့သြမိတယ်။ ဒါနဲ့ ကျမ နှစ်ယောက်စလုံးကို မေးကြည့်ပါတယ်၊ သူတို့ ပြန်ပြောပြတာကတော့ တူနေပါတယ်။ သူတို့ကြောင့် အပြစ်မဲ့တဲ့ မိန်းမ တယောက်နဲ့ ကလေး တယောက်စီ သေခဲ့ရပြီးပြီ၊ ဒီတော့ သူတို့ ဒီရောဂါနဲ့ ဆက်ဆိုးနေမယ်၊ ဆက်မိုက်နေမယ် ဆိုရင် သူတို့တင်မက အပစ်မဲ့ သေသွားတဲ့ သူတို့ ဇနီးသည်တွေနဲ့ ကလေးတွေပါ ဘ၀ကူး မကောင်းအောင် လုပ်သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ တဲ့။ အဲဒီတော့ သေဆုံးသွားတဲ့ မိန်းမနဲ့ ကလေးအတွက် တတ်နိုင်သမျှ ကောင်းမှု အစုစု လုပ်ပေးနေတာပါ တဲ့။
ကျမလည်း ကြည်နူး ၀မ်းသာစိတ်နဲ့ သာဓု ခေါ်မိပါတယ်။ ဒီနှစ်ယောက်စလုံး ကျန်းမာ သက်ရှည်ပြီး ကောင်းကျိုး များများ ပြုလုပ်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်။